"Mitady Fitiavana" Mampiaraka maimaim-poana tsy misy mailaka Mampiaraka amin'ny tranonkala
«Mitady Fitiavana» Mampiaraka maimaim-poana tsy misy mailaka Mampiaraka amin’ny tranonkala
Miezaka ianao mba hiditra ny toerana avy amin’ny tsy mahazatra toerana. Manamafy fa ity no tena ianao dia soraty ny finday isa.
Nahatsikaritra fa ny olona sasany mihevitra fa ny bika aman’endriny, ny zazavavy, na lehilahy tsy dia zava-dehibe. Aoka ny milaza fa ianao nanaiky ny daty, ary izay iray tonga tsy mba madio, inona no ho nataony. Ny hevitro manokana: ilay lehilahy izay manaja ny tenany sy ny hafa, mikarakara ny tenany. Ary tsy izany ihany ka tsy mba hampitahorana ireo mpandalo-by amin’ny alina. Tiako izany — nefa zara raha miresaka momba izany, fitiavana ny marefo — fa tsy ho maro ny masony. Mivarotra ny fahatsapana fa eo anoloan ‘ny fahazavan’ ny fanahinao Rehetra dia mampibaribary. Tsy nihaona izaho manana hira ho toy ny Salama. Rehefa tena fitiavana ho antsika. Toy izany koa ny Nightingale roars ao amin’ny misasakalina ora. Ao amin’ny lohataona, fa hanadino ny sodina tao amin’ny vanin-taona mafana.
Alina dia tsy very ny ody
Rehefa mangina ny fandrotsahana. Fa ny hira, tahaka ny amin’ny sampana rehetra, lasa olon-Tsotra, very ny hatsarany. Ary dia nijanona toy ny Nightingale: Ny nihira sy tsy mihira. Eny, matetika aho no hahita ny maro ny vehivavy izay miasa be dia be ny ratsy sy kely asa ratsy loatra, ary raha ny vady dia manana kely ny asa izay misy ny vola horaisina, izay izy ireo hatrany ny tsy manana. Ary isika tsy maintsy miasa, na dia noho ny fifandraisana amin’ny hafa ny olona, sy ny vola miditra no tsy mandratra, sy ny tsy ilaina ny eritreriny any ny lohany dia tsy hiakatra. Satria izy dia tsy manana ny hery na ny faniriana. Te haka aina ao an-trano ary tsy manao sehatra. Efa nijery fotsiny ho any amin’ny mombamomba ny olona iray. Tsara ny olona Joe mihevitra aho fa ny anarany dia, eny ary, ny mendrika rehetra. misy amin’ny hoditra fiara anatiny. ao amin’ny dobo filomanosana izy niaraka tranobeny, vita any aoriana. fa ny fanontaniana dia aoka tsy fantatrao, dia mety ho tsy toy ny vehivavy mihoatra ny telopolo (nitomany teo. ) Tsara, izay no izy manao eto amin’ny rehetra — dia ny mari-pahaizana LICENCE tao amin’ny arabe. Ny fifindran’ny mahaliana, dia jereo. dia aoka izy hiezaka ny tenany Joe uzho. Izaho sy hanampiana izany koa, ny vadiny dia latsaky ny ahy tamin’ny araka ny enin-taona. (Hey ianao, na iza ianao na iza, Joe. ) tsara, fotsiny aho mba ny fomba. Ary amin’izao fotoana izao dia nahita lehilahy iray hafa ao amin’ny diary momba ny: ‘ny Vehivavy ny lehilahy fampiharana (maimaim-poana te-hilaza), izy no adala toy ny bosoa’ izany taratasy maro ho very foana.
Ary eto dia toy ny fanontaniana hoe: ‘iza no mitaiza ny ankizy, ary INONA no mametraka azy ao an-tsaina sy ao am-ponao.
TSY ny vehivavy na
Ary izy ireo tsy amin’ny antony ny itambaram-be, efa latsa-paka ny fanaintainana ao amin’ny nohaniny mandrakizay, satria izy ireo dia itambaram-be, napetraka tao amin’ny lohany teo amin’ny faha — taona
← Italiana chat room italiana tokan-tena